DAAWO MUUQAAL Gabar u dhalatey Dalka Holland oo lagu darey liiska argagaxisada aduunka - iftineducation.com
DAAWO MUUQAAL Gabar u dhalatey Dalka Holland oo lagu darey liiska argagaxisada aduunka
aadan21 / December 28, 2012
iftineducation.com – Gabar u dhalatey dalka Holland ayaa waxaa la sheegay in lagu darey liiska argagaxisada aduunka iyadoona uu dalkaas Mareykanku uu baadi goob ugu jiro gabadhaas ka dib markii ay gabadhaas ku biirtey jabhada ka dagaalanta dalka Colombia.
Gabadhaan oo lagu magacaabo Tanja Nijmeijer oo 34 sano jir ah una dhalatey dalka Holland islamarkaana ah aqoonyahanada ka qalin jabisay jaamacad ku taal dalka Holland ayaa waxaa la sheegay in ayaa waxaa la sheegay inay in ka badan 10 sanadood ay ka bar bar dagaalamaysay jabhada lagu magacaabo FARC oo ah jabhad dagaal kula jirta dowlada dalkaas Colombia iyadoona ay gabadhaas ay ilaa iyo xilligaas ay ku jirto duurka jungulka ah ee dalkaas islamarkaana ay dagaal kula jirto ciidamada dalkaas Colombia.
gabadhaan oo ka hadleysay sababta ay ugu biirtey jabhadaas ayaa sheegtay inay dowlada dalkaas ay xaqdaro kula dhaqanto dadkeeda islamarkaana ay dad gooni ah ay ka faa’iidaan qeyraadka dalkaas halka ay qeyb badan oo ka mid ah dadka reer Colombia ay ku nool yihiin nolol liidato iyo gaajo.
Gabadhaan oo markii hore u tagtey dalkaas inay luqada ingiriiskaa ka dhigto dalkaas ayaa markey ku soo laabatey dalka Hollland waxay sheegtay inay dareentay dhibka ka jirey dalkaas.
Gabadhaan oo u adeegeysay jabhadaas oo markii hore ka fulin jirtey qaraxyo caasimada dalkaas ee Bogota ayaa ka dib u baxsatey duurka oo ay hada ka dagaalanto, gabadhaan oo wareysi siisay sanadkii 2010 weriye reer Colombia ah ayaa sheegtay inay wadeyso halgankaas ilaa ay guul ka gaaraan ama ay ku dhimato iyadoo ku jirto halgankeeda.
Halkaan Ka DAAWO MUUQAAL Gabar u dhalatey Dalka Holland oo lagu darey liiska argagaxisada aduunka
QISO. Gabar u dhimatay Warqad ay ka heshay ninkeeda oo dhowrsano nolol iyo geeri lagu la’aa
Haweenay Booliiska u sheegtey in ninkeedii uu doonayo in uu isku qarxinayo diyaarad